कञ्चनरुप नगरपालिकाको काम, बालुवामा पानी जस्तै ! | Hakahaki
कञ्चनरुप नगरपालिकाको काम, बालुवामा पानी जस्तै !
२६ माघ, राजविराज । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको काम वालुवामा पानी खन्याएको जस्तै भएको छ ।
काम पूरा गरेको वर्षदिन नहुँदै वडा नं. ८ स्थित पञ्चकन्या विकास प्रतिष्ठानको घेराबेरा भत्किएर लथालिङ्ग भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीयको पहलमा नगरपालिकाले वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको १२ लाख ५० हजार र स्थानीय श्रोतको दुई लाख गरी १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरिएको काडेतारको घेराबेरा उज्रिदै गएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सुरुदेखि नै स्थानीयहरुले गुणस्तर नभएको भन्ने सुझाव दिँदा समेत उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाले काम गरेको तर आफूहरुको कुरा सुनवाई नभएको वुद्धिजीवी गनुलाल श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठकाअनुसार मन्दिर प्राङ्गण क्षेत्रफल ३५५ मिटर रहे पनि घेराबेरा गर्ने क्रममा लागत अनुमान बमोजिम काम भएको छैन । तार र फलामे पोल समेत स्तरहीन प्रयोग भएको उनको आरोप छ ।
गतवर्षकै योजनामा १२ लाख रुपैयाँमा वडा नं. ८ कै सुन्दरी धारापानी पार्क कम्पाउण्ड निर्माण पक्की भएकोे तर तार घेरालाई प्राथमिकता नदिनुमा उपभोक्ता र कर्मचारीको मेलोमतो हुनसक्ने आशंका पुजारी भक्त नारायण श्रेष्ठले गरे ।
इन्जिनियर अशोक कुमार यादवले लागत अनुमानअनुसार काम गर्न समितिलाई सहयोग पु¥याए बमोजिम काम गरिएको उपभोक्ता समितिका सचिव मोहन श्रेष्ठको कथन छ ।
निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट खटिएका प्राविधिक दिलीप यादवका अनुसार आफूहरुले काम गर्दै जाँदा केही प्राविधिक कमी कमजोरी भएको हो । यस्ता काम प्रथम पटक गरिएकाले केही त्रूटी भएकै हो भन्ने ओभरसियर यादवले स्वीकार गरे ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अम्बर श्रेष्ठले भने प्राविधिकको राय बमोजिम काम गरिएको दावी गर्छन ।